REPUBLICADAINIK | तरकारी, फलफूल, चामल, सिलिण्डर कसरी कोरोना मुक्त बनाउने ? - REPUBLICADAINIK
तरकारी, फलफूल, चामल, सिलिण्डर कसरी कोरोना मुक्त बनाउने ?
काठमाडौं । दैनिक उपभोग्य सामग्रीलाई कोरनो भाइरसको संक्रमण रहित बनाउन चिकित्सकहरूले विभिन्न सुझावहरू दिएका छन् ।
कोरोना भाइरसका कारण देश लकडाउनमा रहेका बेला यो भाइरसबाट बच्नका लागि चिकित्सकहरूले विभिन्न उपाय दिँदै आएका छन् ।
डा.रविन्द्र पाण्डेले हातमा पञ्जा लगाएर सुरक्षित रूपमा ग्यास ल्याउन सुझाव दिएका छन् । उक्त ग्यासलाई घरबाहिर साबुन पानीले सफा गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् ।
ओभानो गरेर स्प्रिट वा डिटोल पानीले सफा गर्न सुझाव दिइएको छ ।
त्यसपछि सिलिण्डरलाई आधा घण्टा घाममा राखेर घरभित्र ल्याउनुपर्ने भन्दै डा.पाण्डेले हात राम्रोसँग धुन सुझाव दिएका छन् ।
‘दाल, चामललगायतका सामान ल्याएपछि सबैभन्दा बाहिरको प्याकिंग निकाल्ने र त्यसलाई नष्ट गर्ने । ती बोरा वा झोलालाई आधा घण्टा घाममा राख्ने’, डा.पाण्डेले बताएका छन् ।
‘फलफूल तथा तरकारीलाई काट्नुअघि राम्रोसँग धुन जरुरी छ’, डा.पाण्डेले भने ।
‘सकभर बोक्रा ताछेर खानु सुरक्षित हुन्छ । त्यस्तै, बन्दा, प्याज, काउली आदिको बाहिरको पत्र निकालेर खानु बढी सुरक्षित हुन्छ’, डा.पाण्डेले सुझाव दिएका छन् ।
Published : Monday, 2020 April 6, 11:32 am